Mimwe Mizinda yeNyika dzeKunze Inovharwa muHarare
FILE - A worker arranges flags at the EU headquarters as Britain and the EU launch Brexit talks in Brussels, June 19, 2017.
Mizinda yevamiriri venyika dzekunze yakwanda pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira vange vakavhara, vamwe vaine vashandi vashomanana mushure mekunge mauto azivisa kuti ambotora masimba kuti arange nhubu dzaanoti dzakatenderedza mutungamiriri wenyika, VaRobert Mugabe.
Mumashoko aburitswa Chitatu mangwanani mushure menguva pfupi pfupi mauto azivisa danho rawo, muzinda wemumiriri weAmerica muZimbabwe, wati uri kuongorora zviri kuitika uye muzinda uyu wange waswera wakavhara kune veruzhinji nhasi.
Muzinda wemumiriri weCanada wange wakavharawo neChitatu sezvo vashandi vaudzwa kuti vasauye kubasa.
Mumiriri wemubatanidzwa wenyika dzekuEurope, VaPhillipe Van Damme, varamba kutaura zvakawanda pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe vachiti vari kutaura nevakuru vavo kumuzinda weEU kuBrussels.
Vatiwo EU ichaburitsa mashoko pamusoro pezviri kuitika izvi nhasi manheru kana kuti mangwana.
Sachigaro wesangano renyika dziri muSouthern African Development Community zvakara veri mutungamiriri wenyika yeSouth Africa, VaJacob Zuma, vati mutungamiriri wenyika, VaRobert Mugabe, pamwe nemauto vanofanira kutaurirana kuti vagadzirise zvinhu uyewo vati vatumira nhume dzavo kuzobatsira munhaurirano idzi.
Masangano anoshanda akazvimirira munyika anotiwo nyaya yekubvuta masimba haina kunaka uye masimba anofanira kuchinjwa pachitevedzwa bumbiro remitemo.
Mutevedzeri wasachigaro wesangano rinomirira msangano aya, VaGeorge Makoni, vaudza Studio 7 kuti itariro yavo kuti bumbiro richatevedzwa pakugadzirisa zvinhu muZimbabwe.
Vanotiwo nyika inogona kupinda dambudziko guru kana mauto akanakirwa nekutora masimba.
Mukuru weMedia Centre, VaEnerst Mudzengi, vatiwo kunyange hazvo mauto ave panyanga vanotarira kuti bumbiro richatevedzwa pakugadzirisa zviri kunetsa.
Mumwe Mugari wemuHarare, VaKuda Gore, vaudza Studio 7 kuti vafara nezvaitika nhasi.
Zvichakadai, muguta reHarare mange muine runyararo uye mauto ayo ange akwanda mune mimwe migwagwa, ave mashoma uye ange ave kubvumidzwa veruzhinji kufamba nemumigwagwa iyi.